Rainbow Naab Drill Bits Set Warshadda Dheemanka iyo alaab -qeybiyeyaasha | Yaqiin
Xirfadaha Xirfadaha Ciddiyaha Xirfadaysan
Ku dar 30pcs qaanso -roobaad carbide dheeman. Xirmadaan waxaa ku jira ku dhawaad ​​dhammaan aaladaha qodista ciddiyaha oo laga yaabo inaad u baahato farshaxanka ciddiyaha. Ku habboon manicurist xirfadle ah ama bilowga farshaxanka ciddiyaha.
Nooca: Ciddiyaha Daloolka Ciddiyaha
Waxyaabaha: Carbide, Dhoobada, Dheemanka, Silikoon, Quartz, Dhagax, Dhar, Alumina, Caag, Dhar
Faahfaahinta xirxirida: 6pcs halkii baakad, 7pcs xirmo kasta, 10pcs xirmo kasta, 12pcs xirmo kasta, 30pcs xirmo kasta, 36pcs xirmo kasta, 72pcs xirmo kasta
Midabada: lacag, dahab, nano buluug ah, guduud, qaansoroobaad, madow, caddaan, casaan, jaalle, buluug, cawl, cagaar, bunni, zebra cad,
MOQ: 5sets oo loogu talagalay 72pcs ciddiyaha daloolka ciddiyaha, 50 qaybood oo loogu talagalay qeexidda xirmada kale
Isticmaalka: Daloolinta ciddiyaha, Manicure, Ciddinta Ciddinta, faylka ciddiyaha, saloon farshaxanka ciddiyaha, Pedicure, Saloon farshaxanka ciddiyaha, Daryeelka Quruxda, Dusha sare, Shiididda, Ka saarista baaqyada
30pcs Xirmooyinka Qodista Dheemanka Carbide
Xirmooyinkan badbaadada ee loogu talagalay qodista ciddiyaha ayaa caato u ah meel daboolan oo ka caawin karta qashinka inay galaan meelaha cidhiidhiga ah ee ciddiyaha. Ku habboon in la isticmaalo, maqaarka-ilaaliya, u fiican hagaajinta buuxinta ciddiyaha iyo nadiifinta aagga goynta, dhinacyada. Maaddada carbide -ka dheemanka ah ma aha oo kaliya miridhku laakiin sidoo kale waxay ka ilaalin kartaa burburka kulaylka leh iska -caabbinta kuleylka.Waxaa jira jajab adag, grit dhexdhexaad ah iyo dhaldhalaal wanaagsan. 30 xabbadood oo ah moodooyinka qodista ciddiyaha ayaa la jaanqaadi kara awoodaha kala duwan si loo dhammaystiro shaqooyinka ciddiyaha xirfadeed ee kala duwan. Sida fiiqan, shiid, nadiifsan, carve, smoothen, polish, iyo dib u qaabaynta jel iyo ciddiyaha akril si dhakhso leh oo hufan.
30PCS qoditaanno ciddiyaha oo kala duwan, 3/32 "(2.35mm) cabbir bir bir ah oo bir ah, oo ku habboon inta badan mashiinnada qodista ciddiyaha korantada ee adeegsada 3/32". Ku raagaya adeegsiga waqti dheer, oo ku habboon saloon ciddiyaha, qolka quruxda, spa ama pedicure manicure shaqsiyeed, farshaxanka ciddiyaha DIY guriga.
Way fududahay Nadiifinta
Meelaha qoditaanka ciddiyaha ayaa ah kuwo u adkaysta daxalka, sidoo kale ma xirna ciddiyaha. Burushka ciddiyaha ayaa si fudud u nadiifin kara boodhyada ku yaal qaniinyada ama ciddiyaha, ka ilaali qaniinyada isticmaalka kasta ka dib, adiga iyo ciddiyahaaga caafimaad qabo.
Qalab dheemman oo waara oo u istaagi kara ciddiyaha ugu qaalisan uguna adag iyada oo aan la jabin.Si fudud si looga saaro maqaarka xad -dhaafka ah ama dhintay iyo in la jeexo oo la qaabeeyo ciddiyaha. Beddel shaqadaada farshaxanka ciddiyaha, waxaad ku samayn kartaa DIY farshaxanka ciddiyaha guriga.
Waxaa laga sameeyay daimond tayo sare leh oo adag, oo leh iska caabin daxalka iyo cimri dherer. Naqshad gaar ah ayaa kuu leh xirfad aad ku samayso farshaxanka ciddiyahaaga oo ka ilaaliso maqaarkaaga waxyeello.
Cabbirka Poatable waa fududahay in lagu qaado meel kasta. Ku habboon oo hufan si aad u samayso farshaxanka ciddiyahaaga, adiga oo waqtigaaga badbaadinaya. Qalabkan qoditaanka ciddiyaha ayaa ciriiri kara oo hagaajin kara ciddiyahaaga, qaabka u shiidi doona kana saari kara ciddiyaha jelka ama maqaarka dhintay.
Hore: Qalabka Manicure Daloolinta Ciddiyaha Ciddiyaha Jumlada
Xiga: OEM ODM Mashiinka Ciddiyaha Daloolinta 35000rpm
Xirmooyin Qodista Ciddiyaha La -Dhigay
Qoditaannada Ciddiyaha Dahabka ee Diamond
Xirmooyinka Ciddiyaha Dalool
Ciddiyaha Ciddinta Manicure -ka Ruushka
Rainbow Rainbow Drill Bits Set